Football Khabar » सकेनन् एमबाप्पेले : मेस्सीको पोल्टामा छैटौं गोल्डेन बुट !
सकेनन् एमबाप्पेले : मेस्सीको पोल्टामा छैटौं गोल्डेन बुट !
फ्रेन्च क्लब पिएसजीका फरवार्ड केलियन एमबाप्पेले आफ्नो अन्तिम खेलमा ५ गोल गर्न नसकेपछि सिजन २०१८/१९ को युरोपियन गोल्डेन बुट स्पेनिस बार्सिलोनाका फरवार्ड लिओनल मेस्सीले जितेका छन् ।
३१ वर्षीय मेस्सीले फ्रान्सका युवा फरवार्ड एमबाप्पेलाई ३ गोलले पछि पार्दै कूल ३६ गोलसहित लगातार तेस्रोपटक तथा समग्रमा छैटौं गोल्डेन बुट जितेका हुन् । मेस्सी अब सबैभन्दा बढी गोल्डेन बुट जित्ने खेलाडी पनि बनेका छन् ।
मेस्सीले यो सिजन स्पेनको घरेलु लिग ला लिगामा कूल ३६ गोल गरे । युरोपका टप–५ लिगका सर्वाधिक धेरै गोल गर्दै उनले लगातार तेस्रोपटक गोल्डेन बुटमा बाजी मारेका हुन् ।
नेपाली समयअनुसार शनिबार बिहान फ्रेन्च लिग वानमा पिएसजीले अन्तिम खेल रेइम्जसँग खेल्दा एमबाप्पेमाथि ५ गोल गर्नुपर्ने दबाब थियो । तर, पिएसजी अवे मैदानमा ३–१ ले पराजित भयो । एमबाप्पेले खेलको ५९औं मिनेटमा १ गोल मात्रै गरे ।
गोल्डेन बुटका लागि मेस्सीसँग प्रतिस्पर्धामा रहेका उनले यदि यस खेलमा ५ गोल गरेका थिए भने मेस्सीलाई १ गोलले पछि पार्दै गोल्डेन बुट जित्ने थिए । ४ गोल गरेको भए गोल संख्या बराबरी भई दुवैजनलो संयुक्त रूपमा गोल्डेन बुट जित्ने थिए ।
तर, लिग वानको अन्तिम खेलमा एमबाप्पेले मात्रै १ गोल गरेपछि उनले गोल्डेन बुट मेस्सीलाई जिम्मा लगाए । अन्तिम खेलबाट चमत्कारिक रूपमा गोल गर्दै करिअरको पहिलो गोल्डेन बुट जित्ने दाउमा रहेका २० वर्षीय एमबाप्पे सपना पूरा हुन सकेन ।
एमबाप्पे लिगको ३३, ३४ र ३५औं गरी तीन साताका खेलमा प्रतिबन्धमा परेका थिए । त्यसपछि उनी मैदान फर्किएर २ खेलबाट ५ गोल गरे पनि अन्तिम खेलमा उनले ५ गोल गर्न नसक्दा गोल्डेन बुट जित्नबाट चुके ।
यससँगै मेस्सीले आफ्नो गोल्डेन बुट संख्या ६ बनाएका छन् । उनले यसअघि सन् २०१०, २०१२, २०१३, २०१७ र २०१८ गरी ५ पटक गोल्डेन बुट जितेका थिए ।
प्रकाशित मिति १० जेष्ठ २०७६, शुक्रबार २३:३०